How To Travel Eco Friendly In 2020? | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > How To Travel Eco Friendly In 2020?
Business Travel nechitima, Eco Kufamba Matipi, Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Matipi
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 11/12/2020)
Eco ushamwari kufamba iri nechemberi dzedu sezvo isu kupinda gumi itsva iyi. With kwezvakatipoteredza kurovedzera akadai Robert Swan uye Greta Thunberg, shoko kunyika iri nokudzikinurwa pamwe sekristaro zvakajeka. Tiri vachimhanya kubva nguva kuti wokuchinja panyika uye dzokuchengetedza pfuma yake inokosha.
Change anotanga nhasi uye nesu, zvatinosarudza kuti pave basa ushanyi. Sezvo isu kuva kuziva migumisiro edu zvakatipoteredza uye inogona kuenderera kufamba Kuita, tichiri vanowanzoda kufunga Eco ushamwari kufamba muna iyewo yakafara mupfungwa. Musingavayemedzi kufamba haasisiri chinhu tinogona kusarudza kudya muno uye imomo. Icho chinhu kuti zvinodiwa kuti pebhanhire reefodhi mu hwedu hwezuva nezuva, achiva yechipiri hunhu.
Izvi zvakanaka kuitika ari kuita mberi mafungu yose yose yebasa. Travel establishments vari kudzidzisa simba rezuva, mvura marara hurongwa vave chinozoiswa kuderedza zvinodyiwa uye mapurasitiki kuri kuva kushandisa achidemba vekare. Pane zvikuru pose sangano iri kuwedzera uye uya, netariro uye nokutsunga, achaita kudzokorora zvakanaka kune vaizotevera vafambi usingagoni kuguta. Heano yedu pamusoro mazano pamusoro How To Travel Eco Friendly:
vafambi Vakawanda vakasarudza kuderedza zvavo kabhoni chavangayeukwa kuburikidza kubhururuka zvishoma kana kuzvicherera ndege pakufamba zvachose, runonyanya kupindura Swedish buzzword Flights Kunyadziswa (ndege nyadzi). Hapana chakavanzika yava nendege rimwe kukurumidza kuwedzera mari mamiriro ekunze. Kunyange zvinobhururuka kucharamba nomusi mutambi ari sei tinosarudza parwendo, tinoda kuyeuchidzwa kuti dzimwe mhando vachifamba kupa shamisa Eco mazororo.
chitima kufamba ane nostalgic yakapfuura nyasha ambiance uye ane simba Eco ushamwari kufamba danho rekutanga. Rinopa zvakawanda zvinobatsira kusanganisira zvimwe legroom, achidya ari yokudyira motokari apo kunakidzwa nzvimbo dzokuona dzakanaka, vaifamba vana zviri kure nyore uye vaya vanoda kugara kunofambidzana, hapana ye-mu-ndege modhi. Train navi anoenzanisa zvinonyatsoteerera kuti basa kufamba.
Iva Eco Friendly, Siya pakatsikwa netsoka Only
Kwese isu pakufamba, tinofanira kusiya chete pakatsikwa netsoka. Sezvo Eco Vafambi, isu maimboziva izvi. zvisinei, pamwe nezveizvi rokufurira tiite zvakawanda, tinogona kutora ichi rimwe danho. Chinonyanya zvakanaka chinhu kuona vafambi kubatana pamwe chete uye kusiya kuenda nani isu pane ariwana. Tinorasikirwa hapana kunhonga shomanana zvidimbu marara kuti tinoona pamahombekombe kana mudondo. Uyezve, kugova izvozvo zvakarurama zvinoreva kuti hazvina kunyika kukwira penyanza.
Leipzig kuna Berlin Zvitima
Kutsigira yemunyika haisi chete Eco ushamwari kufamba zvokuita asi kuri vemunharaunda upliftment mupiro. Kutenga munharaunda zvinoreva kuti hapana munhu aifanira kutakura zvinhu avo. kunyange zvakawanda, mabhizimisi vemo vane mukana dzibudirire. Chinhu achidzikisa kabhoni chavangayeukwa uye nemakanzuru munharaunda zvisamumirira.
Iva A Part Of The Eco Friendly Conversation
A Muitiro anova kuitika nokuti anoumba chikamu yose kukurukura. Somunhu Eco mufambi vakazvipira Eco ushamwari kufamba misimboti, tinofanira kuita uye ave chikamu kuti rondedzero. manzwi edu simba. Sezvo tiri kukurukura nevamwe vafambi uye sezvo isu kuenda nemamwe makona pose. Tinofanira kuramba kuparadzira mashoko. Tinotungamira mumwe nomuenzaniso uye sezvo isu kuchinja izvi zvakakodzera kuti hwedu uye isu sei dzinobatsira inogona kuenderera ushanyi, isu kurudzira vamwe kuita zvimwe chetezvo.
Use Public Transportation Or Walk
Kunyange zvingaita sokuti unappealing pakutanga uye kutsvakurudza zvinodiwa kuitwa pamwe maererano kuti yakachengeteka mabhazi uye nzvimbo, vakawanda kupfuura nemunyika chiri Eco ushamwari nzira kumativi pakufamba. It anoshandisa zvikuru kwakaderedza yakawanda mafuta paminiti mutakurwi kufananidzwa motokari.
A kuenda inoita mufambi kuti sika zvose kuti rine pfupiro. Pane zvechokwadi hapana nzira iri nani kutaura nevanhu vayo, ruzivo tsika dzayo, uye tifare munzvimbo yakapoterera. Kutora mabhazi anoita chete kuti uye kufamba chiri nani nzira.
Pack Light And Eco Friendly
Chinhu zvisizvo chikuru kuti chiputiriso chiedza chiri vasingakoshi. Apex chiedza Hapana mubvunzo chiri Eco ushamwari kufamba musimboti tinogona nawo zvose nyore uye ine rakakura zvazvinoita. The raita isu rongedza, kuti kupenya modes yedu zvokufambisa kuchaita nokuyera uye ichi anoshandura kuti shoma mafuta rakawanda.
Imwe nzira kuridza yenyu chikamu inogona kuenderera kufamba ndiko kuti Kutarira kufamba Kit. An Eco noushamwari kufamba Kit panofanira zvichida imwe yemishenjere chikwesheso, shampoo mabhawa, uye sipo mbariro pachinzvimbo chekugeza gels. Miniature shampoos uye ma conditioner uye inoshandiswazve yekudurura-proof tumblers. Aluminium water bottles are vital as well as a metal straw.
The guru Maitiro kuvhakacha 2020 dzinoratidza kuti experiential kufamba ndiyo nzira itsva parwendo. kutama pamusoro, it is classics. Izvi zvinoita nzvimbo zvakaitika kuti showcase tsika, mabasa, uye yakasarudzika nzwisiso yezvekuenda.
Sarudza Suppliers Kuita kuti Sustainable Travel.
Funga Destination vachida Tourism.
Halle maviri Bruges Zvitima
Kana isu hanya kwezvakatipoteredza uye tichida unyanzvi vanofambira, tichaita kuchengetedza, kudzivirira, uye ita kuti kufamba kwedu kuve nechimwe chinhu kune chikuru chakabatana mubatanidzwa wepasi uye Eco ushanyi. Tanga nokutaura Mugshot chitima rwendo pamwe Save A Train, nhasi!
Unoda embed yedu Blog romukova “How To Travel Eco Friendly In 2020?” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-eco-friendly%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Vatariri With A Disability In Europe Made Easy
3 European Cities Best Visited By Train
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Spain, Travel Europe